फोनपे डिरेक्ट: डिजिटल युगमा पैसा लेनदेन गर्ने सरल र सुरक्षित उपाय
Monday, 13 Jul, 2020 1:30 PM
अहिलेको युगमा विश्वभरी लाखौँ व्यक्तिहरुले डिजिटल तथा मोबाइल बैकिङ्ग सेवालाई प्राथमिकता दिएका छन् र यसलाई अपनाएर जीवनमा सरलता पनि आएको देखिन्छ। एफवान सफ्ट​ ईन्टरन्याशनल प्रा.लि ले पनि नेपालको बैँकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबारमा सरलता लिएर आउन आफ्ना विभिन्न फाइन्यान्सियल टेक्नोलोजी सेवाहरु दिँदै आएको छ । यही संस्ठा अन्तर्गत रहेको छ फोनपे नेटवर्क जुन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोबाइल पेमेन्ट नेटवर्क हो भने फोनपेको एउटा सेवाको रुपमा रहेको छ फोनपे डिरेक्ट। तपाईं आफ्नो मोबाइल बैँकिङ्ग ऐपमा गएर पैसा पठाउनको लागि फोनपे डिरेक्ट सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसको नेटवर्कमा ५० भन्दा पनि धेरै बैँकहरु सामेल छन् र यी​ बैँकहरुमा तपाईं कुनैपनि बेला पैसाको लेनदेन गर्न सक्नुहुन्छ ।
फोनपे डिरेक्ट किन सरल र सुरक्षित?
तपाईंले आफ्नो बैँकिङ्ग ऐपबाट पैसा पठाउन फोनपे डिरेक्ट बाहेक अरु कुनै माध्यम प्रयोग गर्दा पैसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बैँकको खाता नम्बर​ एवम् अनेकौँ विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ जुन निकै झन्झटिलो महसुस हुनसक्छ । तर फोनपे डिरेक्टबाट पैसा पठाउन एकदमै सरल छ, केवल पैसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मोबाइल नम्बरबाटै पैसा सिधै उहाँहरुको बैँकको खातामा ट्रान्सफर हुन्छ । यो सेवा प्रयोगकर्ताहरुले न त कसैको बैँक खाता नम्बर याद गरिरहनुपर्छ, न त कुनैपनि किसिमको विवरण नै भर्नुपर्छ ।
धेरैले डिजिटल पेमेन्ट सेवा कत्तिको सुरक्षित होला त भनेर पनि यस मार्फत आफ्नो पैसा लेनदेन गर्न हिच्किचाउनु होला तर एफवान सफ्ट ईन्टरन्याशनल प्रा लि का संस्ठापक, विश्वास ढकालका अनुसार फोनपे डिरेक्ट सेवा एकदमै सुरक्षित छ। मोबाइल नम्बरबाटै पैसा पठाउन मिल्ने हुँदा फोनपे डिरेक्ट प्रयोगकर्ताले बैँकको खाता​ नम्बर गलत हाल्ने सम्भावना रहँदैन र पैसा सजिलै सही व्यक्तिको बैँक खातामा पुग्छ ।
फोनपे डिरेक्ट मार्फत गरिने पैसाको लेनदेनमा प्रयोग हुने टु-फ्याक्टर अथेन्टिकेशनले गर्दा सुरक्षाको हिसाबले पनि यो निकै सबल रहेको छ । तपाईंको हरेक कारोबार पिन नम्बर र फिङ्गरप्रिन्ट प्रयोग गरी मात्र पैसा बैँकको खातामा ट्रान्सफर हुन्छ।
अहिलेको समयमा फोनपे डिरेक्ट झन् उपयोगी देखिएको छ । कोरोना भाईरस लगतै जारी गरिएको लकडाउनले धेरैको दैनिक जीवनमा पैसाको लेनदेनमा समस्या लिएर आएको बेला फोनपे डिरेक्ट एउटा सरल र सुरक्षित उपायको रुपमा लोकप्रिय हुन सफल रहयो । घरमै बसेर पैसा पठाउन मिल्ने भएपछि बैँकमा गएर बेहोर्न पर्ने कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सकिने भयो । हाल आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यलाई नजर राख्ने हो भने डिजिटल बैँकिङ्ग नै उचित र सुरक्षित छ ।
फोनपे डिरेक्ट कसरी प्रयोग गर्ने त?
फोनपे डिरेक्ट प्रयोग गर्न मोबाइल बैँकिङ्ग ऐप आवश्यक पर्छ । त्यसैले पहिले त आफ्नो खाता भएको बैँकको मोबाइल बैँकिङ्ग ऐप डाउनलोड गर्नुहोस् र ‘एक्टिभेट सर्भिस’मा थिची उपयुक्त विवरण भरेर मोबाइल बैँकिङ्गको सेवा सुचारु गर्नुहोस् ।
अब निम्न लिखित प्रकृया पूरा गर्नुहोस्:
आफ्नो बैँकको मोबाइल बैँकिङ्ग ऐप खोलेपश्चात 'सेन्ड मनी' मा थिच्नुहोस्,
'टु रिसिपेन्ट्स’ मोबाइल नम्बर​ (फोनपे डिरेक्ट)' मा थिच्नुहोस्,
पैसा प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तिले पाउने रकम, मोबाइल नम्बर​ र बैँक निश्चित गर्नुहोस्,
पैसा पाउने व्यक्तिको विवरण पक्का गरी 'कन्फर्म' मा थिच्नुहोस,
अन्त्यमा, तपाईंको कारोबारलाई सुरक्षित राख्न पिन नम्बर​ र फिङ्गरप्रिन्ट प्रयोग गर्दै सब्मिटमा थिच्नुहोस्।
तपाईंले आजै आफ्नो बैँकको मोबाइल बैकिङ्ग ऐप डाउनलोड गरेर फोनपे डिरेक्ट मार्फत पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ । थप जानकारीका लागि: https://www.fonepay.com/fonepay-direct मा जानुहोस्।